काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै केन्द्रीय अस्पताल र प्रतिष्ठानहरूमा समस्यै समस्या सिर्जना गरिएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पतालमा सात महिनादेखि उपकुलपति नियुक्ति हुन सकेको छैन । न्याम्समा अरू पदाधिकारी पनि खाली छन् । न्याम्सको उपकुलपति सिफारिस समितिले डा. डीएन साहलाई सिफारिस गरेको सात महिना नै पुग्दा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले न्याम्सको उपकुलपति नियुक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै रोकेर राखेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आरोप लगाएर न्याम्सको उपकुलपति नियुक्तिको विवादमा उम्किन खोजेका छन् । तर अरू अस्पतालमा विवाद र अस्तव्यस्तता सिजना गरी काम नै हुन नदिएको आरोपबाट उनी उम्किने ठाउँ छैन ।
बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको दबाबमा सिनेटले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । पूर्वभ्रष्ट उपकुलपति डा. बीपी दास र रजिस्टार तुलबहादुर श्रेष्ठले डा. रौनियार हुन्जेल ब्रह्मलुट गर्न नपाउने भएपछि मन्त्री यादवलाई ठूलो रकम खर्च गरी हटाउन लगाएको आरोप छ । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई विनाकारण बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको उपकुलपतिलाई हटाउन उचाल्ने काम दीपक बोहराका पालादेखि मन्त्रीको पीए भएका उपसचिव भवनाथ खतिवडाहरूले गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयमा कसरी कमिसन आउँछ भनेर सिकाउने काम मन्त्री यादवका पीए खतिवडाले गरेका छन् ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगीता भण्डारी अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा काम गर्दै आएकी थिइन् । उनीमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ । सुदूरपश्चिमको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन हुनै सकेको छैन । गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि घोषणा भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
वीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर पनि उपकरण खरिदमा भएको अनियमिततामा मुछिएको छ । अप्रेसन थिएटरको उपकरण खरिदमा स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएभन्दा फरक र गुणस्तरहीन किनेर करोडौं रुपैयाँ कमिसन खाएको आरोप अस्पतालका निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्य र निर्मल लामिछानेमाथि लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहेक सबै प्रतिष्ठानमा विवादै विवाद सिर्जना गरिएको छ ।
संघमा राखिएका गंगालाल हृदयरोग केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल, प्रसूतिगृह, जीपी कोइराला स्वास प्रश्वास केन्द्र तनहुँ र सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल नेपालगंज मात्र संचालनमा छन् । जीपी कोइराला स्वास प्रश्वास र सुशील कोइराला क्यान्सर नेपाली कांग्रेसको दबाबमा पछि संघमा ल्याइएका हुन् । यसरी सबैतिर समस्या मात्र सृजना गरी मन्त्री यादवले मन्त्रालयमा अस्तव्यस्तता निम्त्याएका छन् ।